Tag: tsambanhau | Martech Zone
Nhungamiro Yekugadzirisa Yako Email Kuvhura, Dzvanya-Kuburikidza, uye Kutendeuka Mitengo
Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Imwe hurukuro yandinayo vhiki rega rega nevatengi ndiyo nzira inowedzera inovhiringidza yekuvaka nekusimbisa yakabudirira email yekushambadzira chirongwa. Zvichitaurwa zviri nyore, sezvo yako email yekushambadzira runyorwa ichikura, saizvozvowo kugona kwako kutenderera musoro. Zvinotaridza sekuti vanopa internet basa vakasiya chero tariro yekupa mubayiro maitiro akanakisa uye vanongova mbeveve algorithms inoramba ichiranga vanotumira vakanaka. Case in point, mumwe wevandaishanda navo muindastiri akawana Yahoo! ichivharira 100%
4 Maitiro Ekushandura Vashanyi Vatsva kuva Vanodzoka
Chishanu, December 18, 2015 Muvhuro, Ndira 4, 2021 Douglas Karr
Tine dambudziko rakakura muindasitiri yezviri mukati. Chaizvoizvo zvese zviwanikwa izvo zvandinoverenga pane zvemukati kushambadzira zvine chekuita nekuwana vashanyi vatsva, kusvika kune vatsva vateereri, uye kuisa mari mune dziri kubuda midhiya chiteshi. Idzo dzese inzira dzekuwana. Kuwanikwa kwevatengi ndiyo nzira inononoka, yakaoma, uye inodhura yekuwedzera mari zvisinei nechero indasitiri kana chigadzirwa mhando. Nei ichi chokwadi chakarasika pane zvemukati zvekushambadzira nzira? Icho chingangoita 50% nyore
Notablist: Dhizaini Kufuridzira uye Kukwikwidza Tsvagiridzo yeemail Vashambadzi
China, January 8, 2015 China, November 12, 2015 Douglas Karr
Notablist anozvitengesa seemail Tsamba Inotsvaga Injini, iine mamakisi anopfuura mamirioni mashanu ekutsvaga tsamba dzeemail kudarika 5 Vaparidzi. Zvishandiso zvakaita seizvi zvinonakidza kune vagadziri vanoshuvira kuwana kurudziro kubva kumakiyi akakosha kana vatengesi veadhijitari vanoda kuona kana vakwikwidzi vavo vari kutumira uye kuti ndeapi marudzi etsamba nezvibvumirano zviri kutaurwa. Kana iwe uri bhizinesi risina zviwanikwa zvekuyedza, maturusi aya anogona kunyanya kubatsira kubvira